Opx2 Nwụnye Optic - Imewe Mmewe
Nwụnye Optic Opx2 bụ ntinye optic nke na-achọpụta mmekọrịta symbiotic n'etiti okike na teknụzụ. Mmekọrịta ebe ihe nlere, ikwugharị, na usoro na-akọwa ma usoro ebumpụta ụwa na arụ ọrụ nke usoro ịgbakọ. Echichi a na-egosipụta geometry, ihe ọkụkụ na-adịru nwa oge na / ma ọ bụ njupụta yiri oke nke ịkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ kọwara na teknụzụ ka ị na-achọ koodu ọnụọgụ abụọ. Opx2 na-ewulite ihe omumu ihe mgbagwoju anya ma na-agbagha echiche banyere iru na oghere.
Aha oru ngo : Opx2, Aha ndị na-emepụta ya : Jonathon Anderson + Matthew Jones, Aha onye ahịa : Jonathon Anderson Studio.
Arts, nka na ihe eji eme ya
Nwụnye Optic Jonathon Anderson + Matthew Jones Opx2